> Resource > Mac > MacBook Recovery Pro: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga MacBook Pro
Ma MacBook Pro Data Recovery suurtogalka ah?
Hi qof kasta, aan MacBook Pro (17 ") ku shaqeeya off-deg ah saacado ka hor. Marka aan u rebooted waxaan ogaaday oo dhan ee aan 15 fayl iyo files GB in lagu kaydiyaa drive aan MacBook Pro adag loo yaqaan XOGTA lumeen. Ma aanan haysan gurmad ah aad. files Kuwani waa mid aad u qiimo badan igu. suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado ka fayl lumay iyo faylasha? Waan ka mahdinayaa doonaa waxa aad u badan ee ruuxii idinka mid ii sheegi kartaa sida. eego Best.
Waxaad la yaaban yihiin sida ay ku soo kabsadaan xogta ayaa looga badiyay ka Pro MacBook. Waxaan halkan xal fudud idin tusin doonaa tan iyo markii aadan haysan gurmad wax ka mid ah xogta lumay. Runta waxa ka mid ah arrinta khasaaro xogta waa in aad files lumay aan laga saaro nidaamka isla markiiba. Waxay kaliya geli karin on your pro Macbook yihiin ilaa files cusub overwrite meel ay qabsadeen. Tani waxay ka dhigan faylasha aad tirtiray weli halkaa oo aad si fudud u soo ceshano iyaga karaa MacBook software kabashada xogta Pro. Tani ammaan ah oo si sahlan loo isticmaalo qalab u qabata MacBook Pro soo kabashada hab wax ku ool ah oo hufan. Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah.
Halkan ayaan u Khushuucdo Dartiis talinaynaa Wondershare Data Recovery for Mac aad u. Codsigan waa awoodaa inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha in lagu tirtiro ama laga badiyay ka MacBook Pro, oo ay ku jiraan videos, sawirada, files audio, emails, document files, iwm Qalabkani waxa uu si fudud u iskaan doonaa Ma cBook Pro mugga iyo dib u soo ceshano oo dhan laga badiyay, formatted , tirtiray iyo files kharribeen ka.
Qabtaan Data Recovery MacBook Pro in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Ku rakib Wondershare Data Recovery for Mac aad MacBook Pro iyo waxa maamula
Waxaad heli doontaa interface ah sida image hoose, taas oo ku taxan fursadaha soo kabashada oo dhan laga heli karaa tilmaamaha.
Inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted ama xogta laga badiyay ka MacBook Pro, oo aad qaadi karto "lumay Recovery File" sida isku day ah.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo codsiga on mugga in faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Dooro mugga in iskaan for files lumay
Barnaamijku waxa uu haatan ku qor doonaa oo dhan muda / qoruhu aad MacBook Pro. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid sax ah oo guji "Scan" inaad raadiso files lumay.
Sida aad ka arki kartaa in uu furmo barnaamijka, aad leedahay dhawr fursadood oo ah in la doorto, sida "Nooca File Dooro", "Enable Deep Scan" iyo "Dooro File System Scanning". Waxaad samayn kartaa go'aanka sida aad rabto. "Enable Deep Scan" waa mid waxtar leh marka xogta aad lumay, maxaa yeelay formatting.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado qalab lagu kaydiyo xogta dibadda laga badiyay aad MacBook Pro, fadlan hubi in uu noqon karaa mid si fiican u xiran sameeyo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files tirtiray on MacBook Pro
Scan ka dib, dhammaan waxa ku jira helo waa la soo bandhigi doonaa in fayl uu furmo suuqa barnaamijka. Waxaad ka eegi kartaa sida badan files waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan magacyada asalka file. Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan, kuwaas oo files aad u baahan tahay oo ku dhacay "Ladnaansho" badhanka si ay u soo ceshano.
Waxaa looga baahan doonaa in aad xulan meel si markaas ay u sii. Just dooro mugga cusub iyaga badbaadiya, si looga fogaado xogta overwritten.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga shil Pro MacBook
Waxaan aragnay kiisas badan oo soo gaartay xogta Pro MacBook in waxa sababa shil qalab ama drive failure adag. Sidoo kale waxaa jira xal, waayo,
Waxaad ku iman kartaa in xarun adeeg rasmi ah si aad u hesho MacBook Pro go'an. Ka hor inta in, idinka soo jiid kartaa MacBook Pro SSD oo ku xiran Mac kale. Haddii wax xunna waxaa la xiran Mac in, xogta loo akhriyi doonaa. Laakiin haddii xogta lama akhriyo, waxa kale oo aad isku dayi kartaa Wondershare Data Recovery on Mac in inuu ka soo kabsado xogta ka MacBook drive Pro badaan.